भारतमा १३ जनाको ज्यान जाने गरी चुहिएको स्टाइरिन ग्यास के हो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more भारतमा १३ जनाको ज्यान जाने गरी चुहिएको स्टाइरिन ग्यास के हो ?
भारतमा १३ जनाको ज्यान जाने गरी चुहिएको स्टाइरिन ग्यास के हो ?
बैशाख २६ गते, २०७७ - ०८:५९
काठमाडौं । भारतको आन्द्र प्रदेश राज्यस्थित विशाखापटनमा एउटा रासायनिक ग्यास चुहिँदा १३ जना मानिसको ज्यान गएको छ भने ३ सय भन्दा मानिसहरु अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
ग्यासको मुस्लो ३ किलोमिटर आसपाससम्म फैलिएपछि मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्केर भागेका थिए । भारतीय अधिकारीहरुका अनुसार मासिहरुलाई सुरक्षित स्थानहरुमा सारिएको छ भने उनीहरुलाई चिसो कपडाले मुख छोप्न भनिएको छ ।
यो ग्यासले मानिसहरुलाई आँखा पोल्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने भएको थियो । ८० जनाभन्दा बढी मासिहरु गम्भिर छन् र उनीहरुलाई भ्यान्टिलेटरमा राखिएको छ ।
पोलिमर फ्याक्ट्रिमा फ्रिजभित्र राखिएको ग्यास चुहिएको बताइएको छ ।
स्टाइरिन भनेको के हो र त्यसले मान्छेलाई कस्तो असर गर्छ?
स्टाइरिनयुक्त हावामा श्वासप्रश्वास गर्दा नाक र घाँटीमा खसखस हुने, खोकी लाग्ने दम आउने र फोक्सोमा पानी जम्न सक्छ।
यदि स्टाइरिनको मात्रा बढी भयो भने ‘स्टाइरिन बिमार’ हुन सक्छ जसमा टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता आउने, कमजोरी महसुस हुने थकाइ लाग्ने अचेत जस्तो हुने हुन्छ।
केहीलाई मुटुको चालमा अनियमितता हुन सक्छ र बेहोस पनि हुन सक्छ।
केही अध्ययनले स्टाइरिन र रक्त क्यान्सरबीच सम्बन्ध हुनसक्ने जनाएका छन् तर त्यसको प्रमाणित अध्ययन निष्कर्षमा पुगेको छैन।
बैशाख २६ गते, २०७७ - ०८:५९ मा प्रकाशित